Acer laptop အတွက် — MYSTERY ZILLION
Acer laptop အတွက်
ကျွန်တော့်မှာ. Acer laptop တစ်လုံးအတွက်.. Driver လေးတွေလိုနေလို့ပါ.. ရှိတဲ့သူများ လမ်းညွှန်ပေးကြပါအုံးခင်ဗျ... laptop က. Acer Extensa 4620 ပါ.. Chipset က Intel 4965AGN Series ပါ.. Bluetooth 2.0 +EDR ပါ.. အဲဒီအတွက်.. လိုအပ်တဲ့ driver လေး တွေ လိုချင်လို့ပါ.. တခြားဟာတွေ မရရင်နေပါစေ.. bluetooth နဲ့ Network driver လေး များ ရရင် ်လိုချင်ပါတယ်.. ကျွန်တော်လည်း ရှာတော့တော့ တော်တော်စုံနေပါပြီ.. မတွေ့လို့ပါ.. ..:6::6:
အဲဒီထဲကလည်း ဒေါင်လုပ်ဆွဲလို့မရပါဘူး ခင်ဗျာ.. တခြား နည်းလေးများရှိကြရင်.ပေးကြပါအုံး..ခင်ဗျ..:6::6:
link တွေမရရင် acer .com ကိုသွားပြီး အနီးစပ်ဆုံး location ကို ရွေးလိုက်ပါ။ Home Page ကနေ service & support> Driver Download ကိုသွားပါ။ အဲဒီကနေ ကိုယ့်စက် model ကို တဆင့်ခြင်းရွေးပေးသွားပါ။ ပြီးရင်တော့ သက်ဆိုင်ရာ driver တွေ တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ Windows ကလည်း သက်ဆိုင်ရာကို ရွေးပြီး ဘေးနားက မြှားလေးကို နှိပ်လိုက်ရင် ရပါပြီ။ ရှာတာက တောှတောှစုံနေပြီဆိုတော့ တကယ်ရှာရမယ့် acer .com မပါသေးလို့ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ :39: Good luck.
အလွယ်ဆုံးကိုပြောပါမယ်၊ Acer Showroom ကိုသွားပါ။
ဝါးတန်းနဲ့ ကမ်းနားလမ်း ထောင့်မှာရှိပါတယ်။ အစ်ကိုရဲ့ Model ကိုပြောလိုက်ပါ၊ ပိုက်ပိုက်တော့ပေးရလိမ့်မယ် 1500 ကျပ်လို့ရေးထားတာတွေ့ရလိမ့်မယ်၊ အစ်ကို Internet ကနေဆွဲရင်လဲ Bluetooth Driver တင် 100MB ကျော်ပါတယ်၊ ဒီကြားထဲ ဆွဲနေတုန်း Connection ပြုတ်သွားရင် ဒုက္ခ။
ဒါကြောင့် Acer Showroom အပေါ်ထပ်က Acer Service Center မှာပဲ ဝယ်လိုက်ပါလို့ အကြံပေးပါရစေ ခင်ဗျာ။
Acer Service Center မှာသာ သွားတောင်းလိုက်ပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်လည်း Acer Laptop သုံးပါတယ်။
Driver တွေ Down ရတာမသက်သာပါဘူး။အဲ့မှာ သွားတောင်းလိုက်ပါခင်ဗျာ။ သူတို့မှာရှိပြီးသားဆို ခွေဖိုးပဲယူပါတယ်။မရှိဘူး သက်သက်Down ရရင်တော့ တစ်ထောင်လား။နှစ်ထောင်လားမသိဘူး ယူပါတယ်။ရှာရတာနဲ့ မကာမိပါဘူးဗျာ။Acer Show room က မော်တင် အောက်လမ်းမှာပါခင်ဗျာ။:106:
[HTML]http://global-download.acer.com/GDFiles/Driver/Lan/Lan_Broadcom_10.46.0.0_Vistax86.zip?acerid=633639019634312942&amp;Step1=Notebook&amp;Step2=Extensa&amp;Step3=Extensa 4620&amp;OS=V10&amp;LC=en&amp;SC=AAP_10[/HTML]link တွေမရရင် acer .com ကိုသွားပြီး အနီးစပ်ဆုံး location ကို ရွေးလိုက်ပါ။ Home Page ကနေ service & support> Driver Download ကိုသွားပါ။ အဲဒီကနေ ကိုယ့်စက် model ကို တဆင့်ခြင်းရွေးပေးသွားပါ။ ပြီးရင်တော့ သက်ဆိုင်ရာ driver တွေ တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ Windows ကလည်း သက်ဆိုင်ရာကို ရွေးပြီး ဘေးနားက မြှားလေးကို နှိပ်လိုက်ရင် ရပါပြီ။ ရှာတာက တောှတောှစုံနေပြီဆိုတော့ တကယ်ရှာရမယ့် acer .com မပါသေးလို့ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ :39: Good luck.
ကို၀င်းလွင် အခုလိုညွှန်ပြပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ.. အကိုပေးတဲ့လင့်တွေက..window Vista အတွက်ဖြစ်နေလို့ အဆင်မပြေဘူးခင်ဗျ.. အပြင်. သူငယ်ချင်းတွေဆီမှာပဲ လှည့်ရှာလိုက်ပါတော့မယ်ခင်ဗျ... အင်တာနက်က ဒေါင်းလုပ်ဆွဲတာ လည်း သိပ်အဆင်မပြေဘူး ဖြစ်နေလို့ပါ.....acer.com မှာလည်း ရှာ ကြည့်လို်က်ပါတယ်ခင်ဗျ...
အကို တော့ရွာလည်ပီ။ ကျွန်တော် ဖြစ်ဖူးတယ်။ သူ ့အရင် ၀င်းဒိုးနဲ ့ကျတော့ရတယ်။ အသစ်တင်တဲ့ xp & vista ၂ခု စလုံးက သူ ့ပေးထားတဲ့ link ထဲကဟာနဲ့မရဘူး။ ကျွန်တော်လဲ စိတ်လေသွားတယ်။ နောက်ဆုံး တင်လို ့မရတော့ ဒီအတိုင်းပဲထား ထားလိုက်တော့တယ်
အခုလိုဖြေကြားပေးအကြံပေးကြသော.. အမ်ဇက်မှ အကိုများ ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်. ကျွန်တော်အခု အဆင်ပြေသွားပါပြီခင်ဗျာ..
Driver တွေ Down ရတာမသက်သာပါဘူး။အဲ့မှာ သွားတောင်းလိုက်ပါခင်ဗျာ။ သူတို့မှာရှိပြီးသားဆို ခွေဖိုးပဲယူပါတယ်။မရှိဘူး သက်သက်Down ရရင်တော့ တစ်ထောင်လား။နှစ်ထောင်လားမသိဘူး ယူပါတယ်။ရှာရတာနဲ့ မကာမိပါဘူးဗျာ။Acer Show room က မော်တင် အောက်လမ်းမှာပါခင်ဗျာ
မန်းက ဆိုတော့. အင်း၀ ကွန်ပျူတာဆိုင်ကိုပဲ သွားလိုက်ပါတယ်.. အဲဒီက နေ model တူတာကို.၀ယ်ခဲ့လိုက်ပါတယ်.. 1500 ထိတော့မပေးရဘူးဗျ.. 1000 တော့ပေးရတယ်....
သူငယ်ချင်းတို့အားလုံး ရွှင်လန်း ချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ...........